Doorashada Sweden & Danaha Soomaalida: Xisbiyada Miljöpartiet & Vänsterpartiet | Somaliska
Iyadoo doorashada guud ee Sweden ay naga xigto mudo maalmo ah ayaan barnaamijkaan ku soo qaadan doonaa taariikhda iyo siyaasada xisbiyada Sweden oo kooban. Waxaan xisbiyada ku qiimeyn doonaa siyaasadooda ku aadan arimaha soo galootiga iyo qaasatan danaha Soomaalida.
Maanta waxaa miiska noo saaran xisbiyada Miljöpartiet (Xisbiga deegaanka) iyo Vänsterpartiet (Xisbiga bidixda). Hadaba haddaan ku bilowno taariikhda xisbiga Miljöpartiet (MP) ayaa la aasaasay sanadkii 1981 isagoo siyaasadiisa ay ku dhisantahay dhowrista deegaanka iyo dhulka.
Miljöpartiet ayaa ah xisbi u janjeera dhinaca bidixda, iyagoo lagu tiriyo xulufada “Rödgröna” ee ay kula midaysan yihiin xisbiyada Socialdemokraterna (S) iyo Vänstartpartiet (V). Xisbiga Miljöpartiet ayaa waxay leeyihiin labo afhayeen oo kala ah Åsa Romson iyo Gustav Fridolin.
Doorashadii ugu dambeysay ee baarlamaanka Yurub ayuu xisbiga Miljöpartiet guulo fiican ka gaaray iyagoo noqday xisbiga sadexaad ee ugu weyn wadanka. Doorashada guud ee Sweden ee sanadkaan dhici doonta ayaa la filayaa in xisbiga uu si rasmi ah u noqdo kan sadexaad ee ugu weyn wadanka.
Siyaasada xisbiga ee ku aadan soo galootiga ayaa ah mid aad u furfuran iyagoo aaminsan in Sweden ay qaabisho cidkasta oo u baahan magangalyo. Xisbiga Miljöpartiet ayaa ah xisbi si weyn ula dagaalama cunsuriyada, iyagoo ah xisbiga keliya ee sida tooska ah ula dooda xisbiga cunsuriga ah ee SD.
Soomaalida ayaa ah kuwo aad ugu firfircoon xisbiga Miljöpartiet iyadoo sanadkaan ay jiraan Soomaali ka tirsan xisbiga oo u sharaxan baarlamaanka iyo golaha deegaanka. Xisbiga MP ayaa ah xisbiga keliya ee golaha maamulka uu fadhiyo qof Soomaali ah. Xisbigaan ayaa qeyb weyn ka qaatay u doodista mideynta reeraha Soomaalida isla markaana la dhihi karo iyaga ayaa fure u ahaa in familada Soomaalida laga qaado DNA si loola mideeyo caruurtooda. Maadaama uu xisbigaan heshiis la leeyahay xisbiga Moderaterna (M) ee hogaamiyada wadanka.
Dhinaca kale, Xisbiga Vänsterpartiet (V) ayaa ah mid aan sidaa uga siyaasad fogeyn xisbiga Miljöpartiet iyo Socialdemokraterna balse waxay kaga duwanyihiin taariikhdooda. Xisbiga ayaa la aasaasay sanadkii 1917 iyagoo horay loo oranjiray Sveriges Kommunistiska Parti, iyagoo magacaas u badalay Vänsterpartiet Kommunisterna sanadkii 1967, balse magacaas ayay iska badaleen sanadkii 1990. Xisbigaan ayaa ah xisbi lagu tilmaamo xagjir balse siyaasad ahaan aan ka fogeyn xisbiyada kale ee ay xulufada yihiin.
Xisbiga Vänsterpartiet ayaa waxaa hada hogaamiya ninka lagu magcaabo Jonas Sjöstedt, isagoo la doortay sanadkii 2012. Ololaha doorashada ee sanadkaan ayaa xisbiga waxaa ugu muhiimsan sida ay sheegeen in ay meesha ka saaraan shirkadaha ka faa’ida adeega dadweynaha sida iskuulada, hosbitaalada iwm.
Siyaasada soo galootiga ee xisbigaan ayaa ah mid la mid ah xisbiga Miljöpartiet (MP) iyagoo aamisan in Sweden ay irdaha u furto dhamaan qaxootiga doonaya in wadankaan ay iska dhiibaan. Soomaalida ayaa ah kuwo ku firfircoon xisbiga V iyagoo sanadkaan ay u sharaxanyihiin Soomaali ka tirsan xisbiga golaha deegaanka iyo Baarlamaanka Sweden.
Waa la soo xiray ninkii Johny tareenka u dhigay
Xasuusin dad weynaha somalida ah waxaan idin xasuusina sanadkii 2010ilaa iyo 2012 waxaa naheystay ka maqnasho caruurteena iyo walidkan kadib xisbiga lugu magacaabo milöpartiet oo ka qatay kalkn weyn in la mideeyo reeraha somalida hada waxaa inuu sharaxan walalkeyna Abdiqadir oo mudan in aad iyo aad loo codeeyo yaa laga xaasidin codka musharaxan oo hada somalida ka caawiya sooqa shaqada iyo isfahanka kala heysta somalida swedishaka waxaan arkay dad badan oo ka cawinayo faktura oo aysan isticmalin loo soo tuuray sikastaba hayeshee nin iyo nag waxay leyihin abdiqadir waa nin aad ugu firfircoon cawinada somalida hada waxaa waheliya xisbiga wuu u sharaxnyahay waaa isbi macquul ah mi
Mp waxaa uu noqday xizbiga 2 aad ee ugu weyn doorashooyinka yurub ee sweden 2014. Waxaa ay heleen 4 kursi socialdemokraterna ayaa 1aad ahaa waxaa ay helaan 5kursi